Miaraka amin'ny Factory Motor Drive - Shina Miaraka amin'ireo mpamokatra Motor Drive, mpamatsy
Fampidirana OEMQS100-01 / WX10-14 / 18 paompy peristaltika dia nanoro ny hafainganam-pandehan'ny 100rpm; fitaovana amin'ny micro-paompy lohany, mety amin'ny rindrin'ny hatevin'ny 0.8 ka hatramin'ny 1.0mm fantsom-pifandraisana, kodiarana efatra misy kodiarana na kodiarana valo. Fiara mivantana avy amin'ny motera stepper 42 karazana mpampiasa, ny fampiasana fametrahana matevina mifangaro tafiditra ao anaty rindrina ary namboarina arakaraka ny fitakian'ny mpampiasa. Indrindra amin'ny fitaovana, fitaovana manohana ny fampiasana 38mL / min hahatratrarana ny fampitana tsiranoka manaraka. Parameter Motor s ...
Famaritana momba ny vokatra Misy ny lohan'ny paompy JY15, motera 42 ary ny tabilao Drive. Kely ny habeny, fametrahana Flush. ampiasaina amin'ny fitaovana laboratoara, Fitaovana famakafaka. Masontsivana ara-teknika: Hery: DC12V Haingam-pandeha: 0 -100rpm, haingam-pandeha azo ovaina: switch manitsy manual, fifehezana ivelany hifehy ny hafainganam-pandeha hafa. Hafainganam-pandeha ； 5 rpm / min Misy fantsona: 25 #, 17 # tahan'ny fikorianana Max: 170ml / min Karazana fanaraha-maso ivelany: 0-5V, 4-20Ma, 0-10Khz refy: 130 * 73 * ...
Fampidirana ny mpamily paompy peristaltika OEM100J amin'ny alàlan'ny motera 57 stepper mifanaraka amin'ny fomba fanaraha-maso isan-karazany mba hamoronana rafitra kely sy tsotra, fanaraha-maso mora foana ny tsipika vokatra mpamily paompy peristaltika. Indrindra amin'ny fitaovana, fitaovana manohana ny fampiasana 380mL / min hahatratrarana ny fifindran'ny tsiranoka manaraka. DIP switch miaraka amin'ny maody fanaraha-maso signal ivelany, ny signal ivelany tsy voatery 4-20mA, 0-5V, 0-10V, 0-10kHz, ary afaka manome ny fampiasana ny vokatra fanaraha-maso RS485. Mampiasa ...